သူကသင့်ကိုတကယ်ချစ်ရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ ညွှန်ပြသောနိမိတ်လက္ခဏာ ၅ ခု - musanews
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း Psyche & seduction သူကသင့်ကိုတကယ်ချစ်ရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။5ညွှန်ပြကြောင်းနိမိတ်လက္ခဏာ
သငျသညျသူနှင့်အတူအချိန်အများကြီးဖြုန်းနှင့် သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရန်စတင်ဒါပေမယ့်မင်းတစ်ခုခုမှားနေတာလား မဖြစ်နိုင်ပါ သူ၏ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါ, သေးသေချာမည်မဟုတ်ပါ, ဒါမှမဟုတ် သင်တကယ်မကြိုက်ဘူး အဖြေပဲ၊ သိချင်စိတ်ကအနိုင်ရရှိပြီးသင်ထွက်ရှာရလိမ့်မည်! သငျသညျသဲလွန်စပေးသင့်ကိုလမ်းမှန်သို့ရောက်စေနိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးရန်အရာငါးခုစာရင်းကိုကျနော်တို့ပြင်ဆင်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့စာမဖတ်မီ၊ သင်အတွက်ဗီဒီယိုတိုတိုရှိသည် - သင်ဘာကြောင့်လူဆိုးတွေကိုဘာကြောင့်ဆွဲဆောင်တာလဲဆိုတာရှာပါ။
ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ သူကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်၊ မင်းကိုမင်းအများကြီးကြည့်လိမ့်မယ် သင်၏မျက်လုံးများသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်လမ်းဖြင့်သင့်ကိုကြည့်လိမ့်မည်။ သင်ကြိုးစားနိုင်သည် သင့်ကိုကြည့်ရှုပါစေ၊ သို့မဟုတ်သူကရှက်လျှင်သူကသင်၏အကြည့်ကိုသတိပြုမိလျှင်သူကငုံ့ကြည့်နိုင်သည်။
သူ့ကိုသူ့ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်တွင်ကြည့်ပါ၊ ထို့နောက်ကြည့်လိုက်ပါ၊ နောက်ဆုံးသူ့ကိုထပ်ကြည့်ပါ။
အကယ် သင်၏နှုတ်၌မျက်စိကိုပိတ်ထားရပြီ။ surelyကန်အမှန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
Se မြန်မြန်ကြည့်လိုက်ပါ ဦးပြီးတော့သင့်ရဲ့စိတ် ၀ င်စားမှုရှိလိမ့်မယ်။
မင်းဘယ်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ဦး ခေါင်းကိုဖွင့်ပါ ညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်သူကမင်းကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
Se မျက်လုံးချင်းဖေါက်သည် မင်းနဲ့အတူ။
non ရှက်ကြောက်ခြင်းကိုရိုးရိုးစိတ်မ ၀ င်စားပါနှင့် မျက်လုံးချင်းမဆုံဘဲသင့်ကိုဂရုမစိုက်သူများ၏။ သူကရှက်တတ်သူဆိုရင်မင်းကိုမင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာဆက်ပြီးကြည့်နေမှာပါ။ စိတ်ရှည်ပါ!
မင်းသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် မျက်စိအဆက်အသွယ်ထိန်းသိမ်းပါ ဒါကြောင့်မသက်မသာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုမကြည့်ပါနဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာနေသလိုမျိုးအခန်းတစ်ခန်းကိုပတ်ကြည့်ပါ
သူကတစ်စုံတစ်ခုကိုပြောပြီးသင်ကသူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုတွင်ရှိနေလျှင်ဖြစ်နိုင်သည် မင်းကိုစောင့်နေတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူလည်းမင်းကိုကြည့်ချင်တယ် မင်းပြုံးနေတယ် သူကပြောသည်အဘို့။ အကြည့်တစ်စက္ကန့်သာကြာသည်ဒါပေမယ့်သူလိုချင်တာကိုဆိုလိုတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးစေပါ။
အရာအတွက်လမ်း သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည် အမြဲတမ်းနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်တယ် သူကသင့်ကိုသဘောကျမယ်ဆိုရင်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် အမျိုးသမီးများအတွက်အမူအရာ 52 မှတဆင့်သူတို့အကျိုးစီးပွားပြသပါ။ အမျိုးသားများသာလှုပ်ရှားမှု ၁၀ ​​ခုရှိသည်။
ဒါသင်လုပ်လိမ့်မယ် အချိန်လေးကယ်တင်ပါ အရာရှက်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကိုယ်ဟန်အမူအရာအပေါ်မှီခိုအားထားပါ။
သူကမင်းကိုမကြာခဏကြည့်တယ် ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ပြောပြီးပြီ။ ငါတို့သိပြီ။
သူသည်သူ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကို ပို၍ ဂရုစိုက်သည်၊ သူသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးဆံပင်ကို ဖြတ်၍ ပြေးတတ်သည်။ သူရုတ်တရက်လုပ်မိလျှင်၊
အကယ်၍ သူသည်သင့်ပတ်လည်ရှိသူ၏ပခုံးများကိုထိမိလျှင်သူသည်အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်၊ သင်ပြောမည့်စကားကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်အလွန်အရေးကြီးပါသည် စတင်ရန်အကြောင်းကိုသောဆက်ဆံရေး၌။ သူ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလက်ချင်းတွဲတတ်၏ သင့်ကိုထိတွေ့ပုံ နှင့်သင်တို့ထိသောအခါသူကတုံ့ပြန်ပုံကို။
လုပ်နိုင်တယ် သင်၏လက်ကိုတင်လော့ သူရယ်တဲ့အခါ
လုပ်နိုင်တယ် သေးငယ်တဲ့အရာများအတွက်သင့်ကိုပွေ့ဖက်သူသည်သင့်အားဥပမာပေးသောအခါ၊ မိမိအစိတ်ခံစားမှုကိုပြ မင်းကိုပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြနေချိန်၊ "သင်ပွေ့ဖက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသည်။ "
သူကဤအမူအယာနှင့်အပြန်အလှန်လျှင် သင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ကိုရှောင်ရှားမထားဘူးသူသည်သင်၏လက်ကိုသင်၏လက်၌၎င်း၊ သင်၏ခြေထောက်ကိုအရှက်မခွဲဘဲထားခဲ့လျှင်၎င်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူသည်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လျှင်သို့မဟုတ်စိတ်မရှည်ပါကသူစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သူကရှက်တတ်သူဆိုရင် သူအဆင်သင့်မဖြစ်သေးရင်အနည်းငယ်ကြောက်သွားမှာပါ။ သူကမင်းကိုမကြိုက်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။
Gallant အတုများ (သို့) "cascamorto" ဖြစ်သည့်အမျိုးသမီးများအားလုံးကိုသတိပြုပါ။ အခြားသူများကိုသင်ဘာလုပ်သလဲဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အကယ်၍ သူသည်သင့်ကို ချစ်၍ စိတ်လှုပ်ရှားနေလျှင်၎င်းကိုသူစတင်ပြောဆိုလိမ့်မည်။ အမျိုးသားများမကြာခဏ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ manhood သက်သေပြရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်အထူးသဖြင့်ခင်ဗျားသူ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောနေရင် သင်ပြောသည့်အပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုတိုင်းတာပါ။ အမှန်တရားကတော့အဲဒါပဲ ဘာပဲပြောပြောသို့သော်သူကသင့်အားပေးသည်ဟုသင်မည်သို့ဆိုသနည်း မိမိအအကျိုးစီးပွားအဆင့်အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်အများကြီး သင့်ဆီ။
အကယ်၍ လူတစ်ယောက်ကစိတ်မဝင်စားလျှင်ပိုကောင်းအောင်သွားပါ။ သူသည်သင့်ကိုသူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေရာမှခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။
သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်လား။ ကိစ္စမရှိပါဘူး, အကယ်၍ သူသည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်သူသည် chivalrous ကိုစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် သို့မဟုတ်အကာအကွယ်သဘောထားကိုပြသရန်။ ၎င်းကိုအမူအရာများမှနားလည်နိုင်ပါသည်။
ဒါပေမယ့်သတိထားပါ, သူယောက်ျားတွေရှိပါတယ် သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရန်သူတို့သည်အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်ပရောပရည်လုပ်ကြသည်မင်းမနာလိုဘူးလားဆိုတာကြည့်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ရှာရန်လွယ်ကူသည် သူတို့ပရောပရည်တွေအလယ်မှာမင်းတို့ဘယ်လိုတုန့်ပြန်နေကြတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့မင်းကိုကြည့်ကြတယ်။
သင်လည်းဝှက်နိုင်သည် သူမရှိရင်မင်းကစားနေလားမကြည့်ရအောင်သူ့ကိုစူးစမ်းပါ။ အကယ်၍ သူသည်သင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်နှင့်ချက်ချင်းပင်ရပ်တန့်ပါကသူသည်သူမကိုမဟုတ်ဘဲသင့်ကိုသူတကယ်စိတ်ဝင်စားကြောင်းသင်သိလိမ့်မည်။
သငျသညျသူ၏အကျိုးစီးပွားသေချာလျှင်, ဒါပေမယ့် သငျသညျသူမဆိုခြေလှမ်းမပါဘူးကြောင်းကိုသင်မြင်, သင်ပြု! အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ပါ။ ပိုကောင်းသောစွန့်စားမှုဖြစ်လျှင်နောင်တွင်နောင်တရပါ။
ယခင်ဆောင်းပါးသူမမင်းသားဝီလျံကို Lady D ၏အကူအညီဖြင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ပုံကိုနောမိကမ့်ဘဲလ်ကပြန်ပြောပြသည်
နောက်ဆောင်းပါးအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်း - ယူရို ၂၀ အောက်အောက်နွေ ဦး ဝတ်စုံ
ဒီဇင်ဘာလ 14, 2020
နံနက်စိုက်ခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသိရသေးသောအရာများသည် ...
3ပြီလ 2020, XNUMX